Iibhedi eziyi-4 ehlathini - Igumbi leentsuku eziyi-4 ecaleni kwamahlathi - I-Airbnb
Iibhedi eziyi-4 ehlathini - Igumbi leentsuku eziyi-4 ecaleni kwamahlathi
Igumbi lakho lokulala e ifama sinombuki zindwendwe onguAnna
I-Zöld Zug Vendégház esandula ukulungiswa kunye nesitayela se-rustic ilindele iindwendwe zayo kwisakhiwo se-panoramic e-Kóspallag, kumbindi we-Börzsöny.
Kukho amagumbi amabini, le ntengiso yeyegumbi elinebhedi ezi-4. Ikhitshi, ishawari, indlu yangasese kunye negadi kwabelwana ngazo phakathi kwamagumbi amabini. I-terrace enomthunzi, i-grill, i-bacon grill, i-wifi. Kuba le ndlu ikwisiqingatha senduli, ipholile kamnandi nakubushushu basehlotyeni.
Indlu yeendwendwe yenye yezindlu zokugqibela kwisitrato esingaphandle kwilali, ijikelezwe kwicala elinye yiBörzsöny kunye nomsinga. Isikhululo sebhasi, ivenkile, ikhemesti kunye neposi zisekumgama wokuhamba. Ikhitshi elixhotyisiweyo linesitovu, iketile, izixhobo ezigcweleyo kunye nefriji. Ishawari eyahlukileyo kunye nendlu yangasese. Omabini amagumbi ayatshixwa. Egadini ungasebenzisa i-barbecue, i-bacon / indawo yomlilo, ifenitshala ye-terrace, ii-sunbeds.
Ngesiqhelo ungawubeka apha umthwalo wakho phambi kokuba uthathe igumbi lakho, xoxa nje ukuba uza kuza nini :)
Eli ligumbi elineebhedi ezi-4, igumbi elineebhedi ezi-2 linokufumaneka kwintengiso eyahlukileyo :)
I-Kóspallag, le dolophana incinci yabantu be-700, apho ubomi busekho kwinqanaba lomntu, ijikelezwe ngamahlathi kunye neentaba ezivela kuzo zonke iindlela - ilungele nabani na ofuna ngokwenene ukubaleka kunye nokuphithizela kwesixeko, ukunyuka, ukunyuka, phumla, recharge, ilali yokuphila yesintu okanye ukufunda nge-Permaculture kunye nokulima eziphilayo (kukho iifama ezininzi eziphilayo elalini, umz Pallagvölgyi organic Garden).
Ndikwahlala kwisiza ngokwam (kwindlu enomnyango owahlukileyo), kwaye ndifunda ngenkuthalo isitiya, ndigcina iinkukhu, ukuze undwendwe lube nokuqonda kubomi bemihla ngemihla befama encinci.
Ilali kunye neendawo eziyingqongileyo zinxibelelene neendlela zokuhamba, ukusuka apha ungakhwela intaba uye eKirályrét, Törökmező, iArchbishop's Cliffs, iindawo ezingqonge iindawo zokuhlala, kodwa naseNagybörzsöny, kwaye sisiqalo esihle nokuba umhambi uthatha eNagy-Hideg. -hegy okanye Csóványos..
Ngenxa yokusondela ngokuthe ngqo kweDanube Bend (iNagymaros, iKismaros, iVerőce, iZebegény), ukongeza kwindalo, kukho iinkqubo ezininzi zokuzonwabisa: iilwandle ezahlukeneyo zeDanube (ukusuka kwiplaza ukuya kwihlathi elifihliweyo), ukhenketho lokubhexa, irenti isikhephe, iimarike zobisi, iDanube iimalike kunye namaziko ezivulekileyo ntle ehotele ekufutshane.
Ndiyavuya ukukunika iingcebiso kwezi, kwaye ndingakubonisa eyona mbono intle kule lali, malunga. Imalunga neemitha ezingama-500 ukusuka endlwini. Ivenkile yelali ithengisa iitshizi zalapha, ubisi kunye neemveliso zobisi.
Indlu yeendwendwe yohlukile kodwa isecaleni kwendlu yam. Ndiyakwazi ukunceda nanini na xa ndiyidinga, kodwa ndiyayihlonipha i-private sphere ukuze ndingazihluphi.
Iimoto ezimbini zinokumiswa phambi kwendlu (ngaphandle kwentlawulo).
Inombolo yobhaliso ye-NTAK: MA21002992. Indawo yokuhlala yabucala
Ndifikeleleka lula emntwini nangefowuni.
Inombolo yomthetho: MA21002992
Iilwimi: English, Deutsch, Magyar, Italiano, 日本語, Español